DataNumen: Mpikambana ao amin'ny fikambanana iraisam-pirenena
Home Mpikambana amin'ny fikambanana iraisam-pirenena
Mpikambana amin'ny fikambanana iraisam-pirenena
DataNumen mandinika tsara ny fifanakalozana iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa. Manana mpikambana sy fiaraha-miasa marobe amin'ireo fikambanana nasionaly sy iraisam-pirenena manan-danja izy io. Izahay dia mitazona fifandraisana akaiky indrindra amin'ireo andrim-panjakana voatanisa eto, fa DataNumen dia mavitrika ihany koa amin'ny laharam-pahamehana amin'ny fiaraha-miasa hafa amin'ny sehatry ny rindrambaiko, ny fiaraha-monina, ny tontolo iainana ary ny fiaraha-monina.
Fikambanan'ny indostrian'ny rindrambaiko & fampahalalana
Ny Fikambanan'ny Indostria momba ny lozisialy sy ny informatika dia iray amin'ireo most fikambanam-barotra lehibe ho an'ny indostria rindrambaiko sy atiny niomerika. SIIA dia manome serivisy manerantany amin'ny fifandraisan'ny governemanta, ny fampandrosoana ny orinasa, ny fanabeazana orinasa ary ny fiarovana ny fananana ara-tsaina ho an'ireo orinasa mitarika.
Fikambanan'ny mpivarotra rindrambaiko mahaleo tena
Ny Organisation of Independent Software Vendors (OISV) dia mpiara-miasa amin'ireo mpamorona lozisialy, mpivarotra, mpaninjara ary mpivarotra izay manambatra ny eritreriny sy ny heviny hamoronana rindrambaiko sy fomba fanao tsara kokoa ho an'ny rehetra. Ny OISV dia mifototra amin'ny soatoavina fitoviana, demokrasia, fahamarinana, firaisan-kina ary fanampiana ny hafa hahatratra ny tanjon'izy ireo.
Professional Professional indostria
Rindrambaiko Indostrialy Indostrialy dia iray amin'ireo vondrona lehibe indrindra manerantany amin'ny mpikambana ao amin'ny sehatry ny rindrambaiko, miaraka amin'ireo mpikambana 2400 mahery ao amin'ny firenena 93.
Fikambanan'ny matihanina momba ny indostrian'ny rindrambaiko mahaleo tena
AISIP dia fikambanana matihanina ho an'ny olona miasa amin'ny indostrian'ny rindrambaiko tsy miankina. Most Ny mpikambana AISIP dia mivarotra rindrambaiko sy serivisy ao amin'ny tranonkalany, ary miezaka ny manolotra vokatra sarobidy sy mendrika rehefa mamorona fidiram-bola.
Koperativa lozisialy fanabeazana
Ny ESC (Educational Software Cooperative) dia orinasa tsy mitady tombom-barotra izay mampivondrona ireo mpamorona, mpanonta, mpaninjara ary mpampiasa rindrambaiko fanabeazana.
Fikambanan'ny International Professional Data Recovery
IPDRA (International Professional Data Recovery Association) dia natsangana mba hanampy ireo fikambanana sy olona manana lost angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fanondroana azy ireo mankany amin'ny orinasan-tsarimihetsika Data Recovery manam-pahaizana, za-draharaha.